စာအမြဲဖတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းရည် ၆ချက် – Blue Sea
blueseaskt | August 19, 2019 | Knowledge | No Comments
“စာဖတ်​သူ နှင့်​ စာမဖတ်​သူ”
စာ​ပေဗဟုသုတရှိသူသည်​ စာ​ပေဗဟုသုတမရှိသူထက်​ အမြဲတမ်း ​ခေါင်းတစ်​လုံးမြင့်​​နေတယ်​။…
အ​နောက်​တိုင်းသားများက အ​ရှေ့တိုင်းသားများထက်​​ နေရာတိုင်းတွင်​ သာ​နေခြင်းမှာ စာဖတ်​ခြင်း​ကြောင့်​ပင်​ဖြစ်​သည်​။…
အင်္ဂလန်​၌ ရပ်​ကွက်​တစ်​ခု​ဖော်​တိုင်း မဖြစ်​မ​နေပါရ​သောအရာမှာ “စာကြည်​တိုက်​”ပင်​ဖြစ်​သည်​။…
ရပ်​ကွက်​စာကြည်​တိုက်​ပင်​ဖြစ်​​သော်​လည်း ထိုစာကြည်​တိုက်​တွင်​ ကမ္ဘာ့ဂန္ထဝင်​စာအုပ်​အားလုံး ရှိ​နေရသည်​။…
ထိုစာ​ပေဗဟုသုတအား​ကြောင့်​လည်း ကျွန်းနိုင်​ငံ​​လေး တစ်​ခုသာဖြစ်​​သော အင်္ဂလန်​သည်​ တစ်​ကမ္ဘာလုံးနီးပါးကို အုပ်​ချုပ်​နိုင်​ခဲ့ခြင်းဖြစ်​သည်​။..
စာဖတ်ခြင်းက သင့်ကို ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေ ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ
စာဖတ်ခြင်းက ဗဟုသုတတိုးပွားဖို့အတွက်ပဲလို့ ထင်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ စာဖတ်ခြင်းကနေ ဗဟုသုတ တိုးပွားရုံသာမက သင်မသိသေးတဲ့ အခြားကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အားလပ်ချိန်တွေမှာ စာအုပ်
၁. ဦးနှောက်ကို ပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်
စာဖတ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကို အ
လုပ်လုပ်စေပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားကြွက်သားတွေလိုပဲ သင့်
တွေ ကြီးထွားလာလေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂. စာဖတ်ခြင်းက အာရုံစူးစိုက်မှုအား
ဘ၀မှာ တစ်ခုခုကို အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် အာရုံစူးစိုက်မှုရှိနေဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မူအကျင့်ကို
၃. ဗဟုသုတများစွာ ကြွယ်ဝစေတယ်။
သင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြန်လည် အသုံးပြုရမယ့်
အသိပညာတွေပါဝင်ပြီး သင် စာများများ ဖတ်နိုင်လေ သင့်အတွက် ပိုအကျိုးများလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းတစ်အုပ်ဟာ သင့်ကို တခြားကမ္ဘာတစ်ခုဆီ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပြီး သင့်လက်ရှိဘ၀ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ကုသဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅. စာဖတ်ခြင်းက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတဲ့သူတွေ များစွာ ရှိတတ်ပါတယ်။ စာဖတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်မရှိသေးကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သင်ဟာ အိပ်ယာမ၀င်ခင် စာအုပ်ကို
ဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အိပ်စက်ချိန်မှာ ပိုပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်
၆. လူတွေကို ပိုပြီး နားလည်ပေးနိုင်လာ
ခက်အခဲတွေကို ဖတ်ရှုခြင်းဟာ ဘ၀မှာ တခြားလူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပိုမိုသိလာပြီး လူတွေကို ပိုမိုနားလည်တတ်လာပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံကြည့်ပြီး ဝေဖန်ဖို့က လွယ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သင်ဟာ စာအုပ်တွေထဲကနေ လူအများရဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုးစုံကို ဖတ်ထားမယ်ဆိုရင် လူအမျိုးမျိုးကို ပိုပြီး နားလည်ပေးတတ်နိုင်လာပါတယ်
​ကျောင်းသား၏ နှလုံးသားကို ပညာမွတ်​သိပ်​လာ​အောင်​ လုပ်​နိုင်​သူပင်​လျှင်​ အတော်​ဆုံးဆရာဖြစ်​သည်​ဟု ဆာရစ်​ချယ်​လစ်​ဗင်းစတုန်း ဆို​သော
လူငယ်​တို့၏ဘဝကို ပညာနှင့်​ ကိုယ်​ကျင့်​တရား​ကောင်းမွန်​​စေရန် စိတ်​အားထက်​သန်​​လေ့ရှိ​သော
ပညာသင်​ပါ ၊ စာဖတ်​ပါ ။
မေးရင်​ မသိဘူး။ မ​မေးရင်​ သိတယ်​။
တက္ကသိုလ်​ သို့မဟုတ်​ ​ကျောင်း​တော်​ကြီးဖြစ်​​နေလို့ပါဘဲ။
ဒါ​ပေမယ့်​ ​ကျောင်းဆရာမရှိဘူး။ ဝင်​​ကြေးမ​ပေးရဘူး။
စာ​ပေ၊ အနုပညာ၊ ဂီတတို့ကို ကြည့်​မှ
သိနိုင်​မည်​ ဟု မြဝတီမင်းကြီး ဦးစက မှတ်​တမ်း
စာအုပ်​ စာ​ပေသည်​ပင်​လျှင်​ လူ့တန်​ဖိုး
တဖြည်းဖြည်းချင်း လူသားဘဝကို ​​​ကောင်း​ကျိုး​ပေး​
စတဲ့​ ဆောင်​ပုဒ်​များသည်​ စာအုပ်​စာ​ပေကို
အသိနဲ့ အလုပ်​လုပ်​မည်​ဆိုပါက ​သေချာ​ပေါက်​
စာဖတ်​ခြင်းဟာ မင်းကို ဗဟုသုတနဲ့ ပြည်​ဝတဲ့သူတစ်ယောက်​ဖြစ်​​စေတယ်​။
စာ​ရေးခြင်းဟာ မင်းကို တိကျ​သေချာတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ ဖြစ်​​စေပါတယ်​။
သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​စေပါတယ်​။ လိုလျှင်​ကြံဆ နည်းလမ်းရဆိုသလို​ပေါ့။
​တွေးတတ်​ဖိုဆိုတာကလည်း မင်း စာများများ
ဖတ်​မှ ​တွေး​တတ်​မယ်​ဆိုတာ မင်းငြင်းချင်​​သေးလား။
မင်းကိုယ်​မင်း မချစ်​ရင်​​တော့ ​စာမဖတ်​ဘဲ ​နေချင်​သလိုသာ ​နေလိုက်​​တော့။
စာမဖတ်​ခြင်းက မင်းဘဝကို နိမ့်​ကျ​စေမှာဖြစ်​ပြီး
Crdiet to ကျော်ကျော်ခိုင်
“စာဖတျသူ နှငျ့ စာမဖတျသူ”
စာပဗေဟုသုတရှိသူသညျ စာပဗေဟုသုတမရှိသူထကျ အမြဲတမျး ခေါငျးတဈလုံးမြငျ့နတေယျ။…
အနောကျတိုငျးသားများက အရှတေို့ငျးသားများထကျ နရောတိုငျးတွငျ သာနခြေငျးမှာ စာဖတျခြငျးကွောငျ့ပငျဖြဈသညျ။…
အဂင်ျလနျ၌ ရပျကွကျတဈခုဖျောတိုငျး မဖြဈမနပေါရသောအရာမှာ “စာကွညျတိုကျ”ပငျဖြဈသညျ။…
ရပျကွကျစာကွညျတိုကျပငျဖြဈသျောလညျး ထိုစာကွညျတိုကျတွငျ ကမ်ဘာ့ဂန်ထဝငျစာအုပျအားလုံး ရှိနရေသညျ။…
ထိုစာပဗေဟုသုတအားကွောငျ့လညျး ကွနျြးနိုငျငံလေး တဈခုသာဖြဈသော အဂင်ျလနျသညျ တဈကမ်ဘာလုံးနီးပါးကို အုပျချုပျနိုငျခဲ့ခြငျးဖြဈသညျ။..
စာဖတျခြငျးက သငျ့ကို ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့စွမျးအငျတွေ ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ
စာဖတျခြငျးက ဗဟုသုတတိုးပွားဖို့အတွက်ပဲလို့ ထငျနကွေပါတယျ။ တကယျတော့ စာဖတျခြငျးကနေ ဗဟုသုတ တိုးပွားရုံသာမက သင်မသိသေးတဲ့ အခြားကောငျးမွန်တဲ့ရလဒျတွေ အများကွီး ရှိပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ အားလပ်ခိနျတွမှော စာအုပျ
၁. ဦးနှောက်ကို ပိုမိုလှုံ့ဆျောပေးနိုငျ
စာဖတျခြငျးဟာ သငျ့ရဲ့ဦးနှောက်ကို အ
လုပ်လုပျစပေါတယျ။ ဦးနှောကျဟာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ တခြာွးကွကျသားတွလေိုပဲ သငျ့
တွေ ကွီးထွားလာလေ ဖြစ်ပါတယျ။
၂. စာဖတျခြငျးက အာရုံစူးစိုက်မှုအား
ဘဝမှာ တစ်ခုခုကို အောငျမြင်ချင်တယ်ဆိုရငျ အာရုံစူးစိုက်မှုရှိနဖေို့က အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။
စာဖတျခြငျးဟာ သငျ့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မူအကျင့်ကို
၃. ဗဟုသုတများစွာကွယျဝစေတယျ။
သငျ တစ်ခိန်ခိန်မှာ ပြန်လညျ အသုံးပြုရမယျ့
အသိပညာတွပေါဝငျပွီး သငျ စာများများ ဖတျနိုငျလေ သငျ့အတွကျ ပိုအကိုးများလေ ဖြစ်ပါတယျ။
ကောငျးတဈအုပျဟာ သင့်ကို တခြားကမ်ဘာတစ်ခုဆီ ဆွဲချေါသွားနိုငျပွီး သင့်လကျရှိဘဝရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွကေို ကုသဖို့အတွကျ အကောငျးဆုံး နညျးလမျး တစ်ခုဖြစ်ပါတယျ။
၅. စာဖတျခြငျးက နှဈနှဈခြိုကျခြိုကျ
စာအုပ်တဈအုပ်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ အိပျပျောသွားတဲ့သူတွေ များစွာ ရှိတတ်ပါတယျ။ စာဖတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်မရှိသေးကွလို့ ဖြစ်ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သငျဟာ အိပျယာမဝင်ခငျ စာအုပ်ကို
ဖတ်တတ်တဲ့အကျငျ့ရှိမယ်ဆိုရငျ သငျ့အိပ်စက်ခိန်မှာ ပိုပွီး နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ
၆. လူတွကေို ပိုပြီး နားလညျပေးနိုင်လာ
ခကျအခဲတွကေို ဖတျရှုခြငျးဟာ ဘဝမှာ တခြားလူတွရေဲ့ အခကျအခဲတွကေို ပိုမိုသိလာပွီး လူတွကေို ပိုမိုနားလည်တတ်လာပါတယျ။ လူတဈယောက်ကို အပျေါယံကွညျ့ပြီး ဝဖေန်ဖို့က လွယ်ပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ သငျဟာ စာအုပျတွထေဲကနေ လူအများရဲ့ အတွေ့အကွုံမိုးစုံကို ဖတ်ထားမယ်ဆိုရငျ လူအမိုးမိုးကို ပိုပွီး နားလညျပေးတတျနိုင်လာပါတယျ
ကျောငျးသား၏ နှလုံးသားကို ပညာမွတျသိပျလာအောငျ လုပျနိုငျသူပငျလျှငျ အတျောဆုံးဆရာဖြဈသညျဟု ဆာရဈချယျလဈဗငျးစတုနျး ဆိုသော
လူငယျတို့၏ဘဝကို ပညာနှငျ့ ကိုယျကျငျ့တရားကောငျးမွနျစရေနျ စိတျအားထကျသနျလရှေိ့သော
ပညာသငျပါ ၊ စာဖတျပါ ။
မေးရငျ မသိဘူး။ မမေးရငျ သိတယျ။
တက်ကသိုလျ သို့မဟုတျ ကျောငျးတျောကွီးဖြဈနလေို့ပါဘဲ။
ဒါပမေယျ့ ကျောငျးဆရာမရှိဘူး။ ဝငျကွေးမပေးရဘူး။
လူမိုးတဈမိုး၏ အခြေအနေ အဆငျ့အတနျး
စာပေ၊ အနုပညာ၊ ဂီတတို့ကို ကွညျ့မှ
သိနိုငျမညျ ဟု မြဝတီမငျးကွီး ဦးစက မှတျတမျး
စာအုပျ စာပသေညျပငျလျှငျ လူ့တနျဖိုး
တဖြညျးဖြညျးချငျး လူသားဘဝကို ကောငျးကိုးပေး
စာပစေကား နတေို့ငျးကွားက ထူးခြားလိမ်မာရှိသညျသာ။
စတဲ့ ဆောငျပုဒျများသညျ စာအုပျစာပကေို
စတေနာ အမှာစကားများပငျ ဖြဈတော့သညျ။
တကယျတော့ စာသငျတာ စိတျတတျဖို့ပါ
စာသာတတျပွီး စာမဖတျရငျ စိတျမတတျတော့ပါ
စိတျမတတျရငျ ပညာတတျ လူပေါကွီးတွဖြေဈသွားတတျပါတယျ။
မရှိတာလညျး ရှိအောငျလုပျရငျ ရှိနိုငျပါတယျ
မသိတာလညျး သိအောငျလုပျရငျ သိနိုငျပါတယျ
ဒီလိုဆိုရငျ စာဖတျပွီး သိသွားနိုငျပါတယျ။
အသိနဲ့ အလုပျလုပျမညျဆိုပါက သချောပေါကျ
ဘဝမှာ ကိုယျဘာသိချငျသလဲ စာဖတျပါ။
ဘဝမှာ ကိုယျဘာရှိချငျသလဲ စာဖတျပါ။
ဘဝမှာ ကိုယျဘာလုပျချငျသလဲ စာဖတျပါ။
စာဖတျခြငျးဟာ မငျးကို ဗဟုသုတနဲ့ပြညျဝတဲ့သူတဈယောကျဖြဈစတေယျ။
စာရေးခြငျးဟာ မငျးကို တိကျသချောတဲ့သူတဈယောကျ ဖြဈစပေါတယျ။
သူတဈယောကျဖြဈစပေါတယျ။ လိုလျှငျကွံဆ နညျးလမျးရဆိုသလိုပေါ့။
တွေးတတျဖိုဆိုတာကလညျး မငျး စာများများ
ဖတျမှ တွေးတတျမယျဆိုတာ မငျးငြငျးချငျသေးလား။
မငျးကိုယျမငျး မချဈရငျတော့ စာမဖတျဘဲ နချေငျသလိုသာ နလေိုကျတော့။
စာမဖတျခြငျးက မငျးဘဝကို နိမျ့ကျစမှောဖြဈပွီး
Crdiet to ကျောကေ်ျခိာုငျ
“The reader who can not read”
The owner had no knowledge of knowledge is higher than ever ….
After than before because even reading everywhere ….
A piece of England in every single thing that is “clear” ….
Ward firm, but the firm, the world’s classic book all alone ….
This knowledge is an island country in England for nearlyaGlobe Administration been able …
(Loving land of gold) …
What is your reading can provide significant energy think
Reading are in the ring in order to increase knowledge. In fact, reading is to increase the knowledge, but you know there arealot of other good results. So spare time
1. Stimulate the brain more
Karma. Like most of the other muscles of the body and the brain
Exercise, your muscles
2. Reading is the concentration
0 stay focus if you want to achieve something very important.
Reading focus your manners
You can easily raise.
3. Brings rich knowledge.
Reading books helps knowledge
Philosophy can rise.
You will not ever be re-used
အသိပညာတှေ should join in and you can read more in benefits.
4. Reduce stress symptoms.
A good book, good novels
A copy of the good that can be taken to draw you toadifferent world of your current0This is the best way to treat stress.
5. Reading is soundly
Many people who go to sleep when the hand ofabook here. They’re not reading practices.
But if you book before bed 0
If you have works that often read in your sleep more soundly
6. The ability to help people understand more
Other people’s experiences, The
Difficult reading of0to other people’s difficulties are more and more people came to know and understand. When the surface is easy to criticize. But if you read books fromawide range of experience in public every nation to be able to understand more
Any teacher to disciple
One that can not be used
The research will not be sent.
The student can makeahungry heart, even if he is left is still colored slip Vicente
The person said education teaching its axis.
Youth education and good moral life are often eager to
U Aung Thin remarks
If you love your parents, education, reading
If you love the country and nation
I do not know ask. I know to ask.
You have the experience shared.
University or school life itself.
But no teacher. No entry fee.
Thenaglass
As the nation’s status
Minimum height If you need to know
, Art, Music
The king will know Myawaddy, recorded
Even books Literature human value
Fellow human status.
The new plant of the same plant.
Gradually broken human life
Time to take advantage of.
Book Human Mate
It seems remarkable cunning.
The book tracks
Want Want to read better wake up
Even if you can not read much
Educated people are starting out.
I can do nothing because
Says the most difficult.
Sure if they will work inasupplement
I was curious to read what my life.
I read what you want in life.
I do not want to read what my life.
The reading will be filled with the knowledge of one’s life.
I hadagood understanding.
Read more if you wantagood understanding.
I hadacertain way.
Ever heard of the proverb.
I thought it the perfect way
A. GET best.
I think you do not want to deny that.
Himself and I love reading.
I love you if you want to be read out.
I can not read the low life
The reading of my life will be bright
More than Crdiet to strong
ဆုံးဖြတ်​မ​စောလိုက်​ပါနဲ့ သင်​မြင်​တဲ့အရာတိုင်းက အ​ကြောင်းရှိမြဲ